Planet X inganekwane ziyadalulwa - Izindaba Rule
Planet X inganekwane ziyadalulwa
Kwakuyisenzo esasibonisa iplanethi okunzima ngayo ukufinyelela lelo for 200 iminyaka wabonakala ukuchaza Uranus'S orbit ukucathula. Futhi kwakukhona ilanga udade babecabanga ukuba seduze kwethu uhlelo lomkhathi oholele asteroyidi ukuba Phambuka ngase Earth.
Kukhona inkinga eyodwa nje: neither “Planet X” noma “Nemesis” obabukhona, Abacwaningi manje bathi.
Noma mhlawumbe hhayi.
“The yangaphandle yesimiso sonozungezilanga cishe ayiqukethe i gas esikhulu iplanethi enkulu (“Planet X”), noma encane, umngane inkanyezi (“Nemesis”),” waphetha University of Pennsylvania sezinkanyezi Kevin Luhman, owaqondisa cwaningo ngokusebenzisa Wide-field NASA seso Survey Explorer (KUWUKUHLAKANIPHA) isibonakude.
Imiphumela babeyifunda kulo kumagazini yamuva iningi Astrophysical Journal.
eyeza nezazi zezinkanyezi ezikhuluma Iningi lase Kulinganiselwa Planet X ukuba abe kane ubukhulu Jupiter — the planet semithombo esimisweni sethu sonozungezilanga.
They wasikisela it sasizotholakala ezinye 1,486 billion kilometers (923 billion miles) kusukela ekuphumeni kwelanga, noma mayelana 10,000 Izikhathi kunalokho orbit eMhlabeni.
Kodwa izithombe bahlangana by telescope abazange bona noma yini beyizidlakela kunamanye Jupiter.
Luhman alikwenqabeli ukuphuza kungenzeka ukuthi iplanethi is ame endaweni ethile ibhande nedwala elisemkhathini.
A yikhompuyutha NASA montage eyatholakala 29 August 2002 kusukela izithombe letigcogcwe Voyager 2 mkhathi kubonisa Neptune (Lower-L) njengoba kubonakala sengathi kusukela mkhathi lusondela Triton, moon ngobukhulu Neptune sika
Kungaba nzima ukuthola uma babesondelene ahambisana inkanyezi egqamile ukuthi siphuphuthekisa telescope noma zazincane okuningi kunalokho okwakulindelwe babecabanga.
Kodwa ngemva lolucwaningo yakamuva, Luhman uthe izingqinamba ethola iparele elilodwa cishe kakhulu: “Lokho kufana a one namashumi ithuba.”
– Umlando Planet X –
Ososayensi kuqala wacabanga ukuba khona Planet X 1781, lapho bethola Uranus, giant igesi ukuthi wamangaza izazi zezinkanyezi zayo ezihlukahlukene esemkhathini, ngokusobala kungavumelani nala nemithetho Newton ye-gravity.
Izingqapheli baphetha ngokuthi babengase lezi semfene wachaza ukhona nomunye, planet ezingaziwa ukuthi kwaba ezikhandla amandla ayo adonsela phansi siqu.
isiZulu: Lena isithombe planethi Uranus esithathwe mkhathi Voyager 2 in 1986 (Photo credit: Wikipedia)
Imizamo ukulandelela le engaqondakali Planet X kwaholela ekutholakaleni Neptune e 1846. Kodwa mass elilinganisiwe Neptune abakwazanga ukukuchaza lokuchezuka izungeza Uranus sika.
Lokho kwaholela izazi zezinkanyezi ukuba baqhubeke befuna Planet X — okuyinto, esikhundleni salokho, kwaholela ekutholakaleni Pluto e 1930. Kodwa iplanethi into encane wayebuye ezincane kakhulu ukuze achaze indlela Uranus ngendlela, uzungeza ilanga.
Ekugcineni, in the 1990, Abacwaningi kunqunywa ukuthi sebetholile ababekuqondile kancane overestimated nenqwaba Neptune, elalifanekisela iplanethi babekwazi eqinisweni ibe isizathu sokugubha ukuziphatha Uranus sika esemkhathini.
Nokho Planet X makholwa ayesabizwa uyaqiniseka.
– ilanga Sister Kushone izibankwakazi? –
Ukuba khona Nemesis, welanga like inkanyezi eseduze, kwase kuqala posited 1980. Lesi sihlabani, by ngezikhathi ezithile besondela ku ilanga, liphazamisa emzileni lezinkanyezi ezinomsila kanye asteroyidi ebaholela ngezikhathi ezithile hit Earth.
Ukushayisana ezinjengalezi kuthiwa yiwo abangela ukuba kuqothulwe ezinhlanu mass phezu wokugcina 540 iminyaka million — yakamuva kokuba ukushabalala dinosaur 65 eminyakeni million edlule.
“Ngakho kule minyaka edlule, sekube izingcezu ezahlukene ubufakazi esikisela kungase kube into khona,” Luhman wachazela AFP.
Kodwa telescope EHLAKANIPHILE Asitholanga lutho.
Kungenzeka azingela Planet X and Nemesis waphenduka ingenalutho, kodwa lolu cwaningo akazange embule 3,525 izinkanyezi kanye dwarfs brown — izinto ezisemkhathini ogama mass kubabeka phakathi inkanyezi kanye iplanethi enkulu — ngaphakathi 500 iminyaka ukukhanya kwelanga.
“Elingumakhelwane star izinhlelo eziye ecasha emehlweni plain nje siphume idatha KUWUKUHLAKANIPHA,” wathi Ned Wright, a University of California, Los Angeles sezinkanyezi abasizileko isifundo.
26193	0 Gas giant, NASA, Nemesis, Neptune, Amaplanethi ngaphesheya Neptune, Uhlelo lomkhathi, Uranus, Wide-field seso Survey Explorer
← RIAA ufuna Google ukuze senze okuningi ukulwa 'ukudunwa’ Ithuluzi New ukulwa nokukhwabanisa →